Al-Shabaab oo burburiyay Xarun Shirkad Isgaarsiineed - Awdinle Online
Al-Shabaab oo burburiyay Xarun Shirkad Isgaarsiineed
Wararka laga helayo degaan hoostaga Magaalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya xayaa waxaa ay sheegayaan in xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen Saldhigyo ay ku sugnaayeen Ciidamo Kenyan ah iyo kuwa degaanka ah.
Weerarka ayaa waxaa uu sigaar ah uga dhacay deegaanka Shiir ee hoos yimaada degmada Mandheera, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal kooban oo dhex-maray Ciidamada degaanka ku sugnaa & Al-Shabaab, sida ay Warhainta u sheegeen dadka degaanka.
Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarkaas, iyaga oo sheegay inay muddo saacado ah maamulayeen deegaanka Shiir ee hoos yimaada degmada Mandheera, in kastoo aysan jirin warar madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Al-Shabaab ay burburiyeen Xarunta Shirkadda Isgaarsiinta Safaricom ee degaanka Shiir, kadib markii ay qaraxyo ku xireen, hayeeshee la sheegay in qaraxyadaas aysan geysan khasaaro nafeed.
Al-Shabaab ayaa horay degaano ka tirsan gobolka Waqooyi Bari waxaa ay uga fuliyeen weraro kala duwan, iyaga oo sidoo kale burburiyay Xarumo dhowr ah oo ay leedahay Shirkadda Isgaarsiinta Safaricom.
Previous articleUrurka Iskaashiga Islaamka oo cambaareeyay qaraxyadii ka dhacay Garoonka Cadan
Next articleKheyre oo ku baaqay in xal deg deg ah laga gaaro muranka doorashooyinka